Ndeipi chikamu chakanakisa cheDanube Cycle Path? > Nebhasikoro
↓ Svetuka kuenda kuZviri Mukati
Iye zvino Danube Cycle Path
Nhanho 5 Melk - Krems
Chii chinonzi Wachau?
Chitubu paDanube Cycle Path muWachau
Apricot inotumbuka muWachau
Rear building dongo
Chii chinonzi Danube Cycle Path?
Danube rwizi rwechipiri rwakareba muEurope. Inosimuka muGermany uye inoyerera ichipinda muGungwa Dzvuku.
Kune nzira yekutenderera padhuze neDanube, iyo Danube cycle nzira.
Kana tichitaura nezve Danube Cycle Path, isu tinowanzo kureva nzira yakafambwa kubva kuPassau kuenda kuVienna. Chikamu chakanakisa cheiyi nzira yekutenderera padhuze neDanube iri muWachau. Chikamu kubva kuSpitz kuenda kuWeissenkirchen chinozivikanwa semoyo weWachau.
Rwendo kubva kuPassau kuenda kuVienna kazhinji rwakakamurwa kuita nhanho 7, avhareji ye50 km pazuva.
Kunaka kweDanube Cycle Path
Kuchovha uchidzika neDanube Cycle Path kunoshamisa.
Zvinonyanya kunaka kutenderera wakananga kurwizi runoyerera mahara, semuenzaniso muWachau paDanube kumaodzanyemba kwebhangi kubva kuAggsbach-Dorf kuenda kuBacharnsdorf, kana kuburikidza neAu kubva kuSchönbühel kuenda kuAggsbach-Dorf.
mumazuva 7 Passau Vienna
Panzira paDanube Cycle Path
Chii chinonzi Heuriger?
Kuchovha mabhasikoro (vatyairi vebhasikoro vanorarama zvine njodzi)